Tijaabinta Netbook ee CAD / GIS - Geofumadas
Imtixaanka Netbook ee CAD / GIS
Febraayo, 2009 Geospatial - GIS, IntelliCAD, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Maalmo ka hor waxaan ka fiirsaday tijaabinta in Netbook noocan oo kale ahi ka shaqeeyo jawiga dhulka, xaaladdan waxaan tijaabiyey Acer One oo farsamayaqaannada miyiga qaarkood igu amreen inaan soo iibsado booqashada magaalada. Tijaabadu waxay iga caawisay inaan go'aansado haddii soo-iibintayda soo socota aan maal-gashado HP kale oo wax-qabad sare leh ama haddii xalalkan cusubi ay noqon karaan kuwo dhaqan-gala.
Mashiinnadani maaha kuwo loogu talagalay geeddi-socodka u adeegsanaya ilo ku filan, si kastaba ha ahaatee macnaheedu maaha in aanay haysan karti ku filan:
Xusuusta RAM 1GB
160 GB darawal adag
10 screen ''
Waxay la socotaa saddex dekedood oo USB ah, dekedda Datashow, isku xirka wireless, kaararka kala duwan iyo maqalka / maqalka.
Kiiboodhku wuu yara yaraa, dhib malahan kuwa wax ku qoraya laba farood (sida digaag cunida hadhuudhka) laakiin hadii markii aan yaraynay aan qaadanay koorsada qorista, waxaad dooneysaa inaad xoogaa la qabsato. Xoogaa ka xanaajinaya furayaasha duudduuban iyo maaraynta jiirka farta badhkeed qaloocday; midigta jiidaya midig waxay leedahay shaqeynta zoom laakiin badhamadu aad ayey u adagtahay in la riixo; Waxaan u maleynayaa inay fiicnaan laheyd la shaqeynta jiir dibadeed.
Sababta ugu weyn ee loo go'aansado in tani aysan ahayn koox shaqo adag, waxay tahay cabirka shaashadda ee daalaysa indhaha, way ku fiican tahay safarka laakiin inaad sideed saacadood ku qaadato inaad qumbaha ku jebiso vector iyo asal madow ... maahan Waxaan qabaa. In kasta oo ay leedahay deked ay ku xidhi karto kormeeraha haddii ay ku isticmaasho xafiiska.
Sida software, waxay la yimaadaan Windows XP, taas oo u wanaagsan isticmaalka khayraadka yar, inkastoo ay tahay version version Pro ee IIS ma keeno ... xun ee Manifold. Waxay sidoo kale la socotaa nooc 60-maalmood ah oo Office 2007 ah, oo ay dhacdo in duqsigu keeno Microsoft Works oo had iyo jeer laga helo Microsoft laakiin qiimo aad u hooseeya leh.
La shaqeynta CAD
Waxaan ku shaqeeyay Microstation Geographics V8, oo ku xiran kaydinta xogta adoo adeegsanaya ODBC. Mudanayaal, waxay shaqeysaa iyada oo aan dhib badan la qabin, Bentley Map waxay dareemeysaa mid culus laakiin ma ahan mid daran.
Loading lix .ecw orthophotos of 11 MB midkiiba, ma xuma. 22 khariidadaha cadastral dgn 1: 1,000… dhib malahan.
U beddelo ecw hmr ... ogh! halkan waxa fiican ayaa ka bilaabmaya, mashiinka tan ku jira ma laha waxqabad sare laakiin ugu dambayntii wuxuu ku gaadhay 2:21 daqiiqo, wuxuu u beddelay ecw 8MB ilaa 189 MB hmr, beddelaad aan macquul ahayn, waan ogahay laakiin qaabkani wuxuu si dhakhso leh ugu socdaa Microstation. Uma maleynayo inay fiicantahay in lala shaqeeyo Tiff culeyska awgiis, laakiin waxay noqon kartaa ikhtiyaar itif ah oo leh awoodo dheeri ah.
Dhab ahaan, mashiinka Mashiinka yar yar waa mashiinka yar yar, inkastoo ay jiraan dad kale oo haysta kaarka NVidia oo hubaal ah inay ka dhigayaan natiijooyin wanaagsan.
Barnaamijyada fudud, sida Microstation si fiican ayaan u arkaa. Uma maleynayo in gvSIG isbedeladiisa ugu dambeeyay ay shaqeyn doonaan ilaa ay wiilashu xoojiyaan isticmaalka ilaha iyagoo la shaqeynaya lakabyo badan ama ku xiraya adeegyada OGC.
Waan ku qanacsanahay waxa ay adeegsigeydu u jeedaan: Waxaan ku dhejiyey Microstation V8, BitCAD, Manifold GIS, Avira, Microsoft Shaqo, Live Writter, Foxit y Chrome. Toddobaad ka dib waan ku qanacsanahay sida socdaalka joogtada ah, blogger iyo hiwaayadda CAD / GIS… aad bay u xun tahay inay ahayd amaah.
$ 400 ee toy-daan waa u qalantaa, uma arko maalgashi xun, laakiin tixgeli soo noqoshada kuwa kale fili karaan. Waa feker wanaagsan oo beddel ah oo lagu qaadi karo boorsada gudaha ee jaakadda ama jaakadda, maaddaama cabirkiisu yahay kan ajandaha, halka ay ka sii nabdoon tahay in lagu qaado bartanka galka, halista ka yar qaadashada shandada Targus bay'adaha ay dhammaan dambiilayaashu u maleeyaan inay gudaha ku jiraan.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la tixgeliyo qasaarooyinka, maxaa yeelay in kasta oo culeyskiisu aad loo maarayn karo, iyadoo aan la keenin CDrom waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro qalabkan siyaado ah; Iyada oo leh 8GB USB, rakibidda barnaamijyadu uma muuqato mid aad u adag laakiin haddii ay lagama maarmaan ahayd in la qaabeeyo ama laga nadiifiyo fayraska dambiyada ... shaki baa iga jira. Haddii aan ku darno bateriga AA jiirka bilaa-waayirka ah iyo kiniin garaafyada ah… waxay u badan tahay inuu noqdo mid culus sida 14 "
Haddii aad iibsan laheyd PC-ga waxqabadka sarreeya, kuwa $ 500 Compaqs ah waxay ka badan yihiin 2GB oo RAM ah, oo leh Intel Duo iyo kaarka muuqaallada shaqsiyeed. Runtu waxay tahay in mudada yar ee buugaagta netbook ay ka socdeen ASSUS, hubaal sanad iyo badh waxaan lahaan doonnaa mashiinno aad u adag oo qaababkan yar yar ah.
Website: Acer Aspire One
Acer Aspire Bentley Systems blog Dgn GvSIG OS GIS kala cayncayn ah
Post Previous" Hore Anigoo ah Congress of Recovery Congress Latin America
Post Next AutoCAD madani 3D, dhibcaha soo dejinta ee ka soo baxa macluumaadka dibaddaNext »
5 Jawaab ah "Tijaabinta Netbook ku jirta CAD / GIS"
Waxay ku xiran tahay, haddii ay tahay jimicsi kaliya, ma dareemaysid in aad u liidato.
Laakiin haddii ay tahay in badan oo shaqo ah, qalabkani ma aha mid ku filan, wuxuu dareemayaa gaabis ahna cabbirka shaashadda ayaa indhaha ka ilaalisa indhaha.
Danny isagu wuxuu leeyahay:
Hada, Sidee ayaad tahay? Aad u fiican, warbixinta ayaa iga qaaday shaki badan intaan iibsaday. Waxaan ku waydiinayaa su'aal, waxaan ku baranayaa sudheer muuqaal ah 2010 iyo autocad, miyaad u maleyneysaa in mashiinkaas aad si fiican u shaqayn karto?
Hubaal waa in ay awoodaan in ay ordo sababtoo ah qoraalkani waxa uu ahaa mid aad u iftiimaya, waxaan u maleynayaa in xitaa xitaa 2002 ay si fiican u socon karaan mashiinkan.
Gabriel isagu wuxuu leeyahay:
Waan ka xunnahay, waxaad ogtahay haddii AutoCad 2000i si caadi ah u shaqayn karto (wax aan ka ahayn 3d) nooca buugta.
Salaan iyo blog wanaagsan
Jejeje Waxaan haystaa mid ujeeddo, qaabka ka hooseeya midda aad isku dayday, sida oo kale laakiin leh 512 of RAM iyo SSD disk of 8GB.
Anigu ma u isticmaali laheyn saldhig shaqo, gaar ahaan kumbuyuutarka, inkasta oo aysan ahayn mid aan raaxo lahayn haddii ay tirtirto markaad halkaas joogtay muddo dheer.
Dhinaca kale koox ahaan sida aniga oo kale ah, XP waxay raaci laheyd oo mar walbana ma jecli. Waxaan Debian ku dhejiyey wax yar oo waxaan u shaqeynayaa iftiin iyo khasaare wixii aan rabo: internetka, fariin, sheekeysi, qor dukumenti iyo haddii jadwalka lagama maarmaanka ah sigaar cabbo.
Maaddaama ay ahayd hadiyad inaanan cabsanin, hada waxaan hubin lahaa hal batteri oo dheeraad ah, malaha waxoogaa RAM ah oo dheeraad ah iyo hadii loo baahdo shaashad dheeraad ah. Cilladahan oo ay la socdaan saacadaha 6 ama 7 ee madax-bannaani waa farxad dhab ah.
Si kasta oo guriga ah, waxaan horeyba u geliyey kormeeraha 19, ”waxa aan ugu yeedho wiilka yar ee“ koobabka ”🙂